Zimbabwe Wedding Archives - Zimbabwe Wedding
Are you getting married soon, and you are wondering what kind of music to incorporate into your wedding music playlist? Check out this list of top 10 Zimbabwe wedding songs – songs that will express your love for one another and put all your guests in a celebratory mood! 10. Ruva Rangu Ndiwe Chete Ruva Rangu by the Pied Pipers is a song ideal for a slow dance for the … [Read more...]
Though many young people in Zimbabwe have opted to have modern weddings, traditional weddings, or weddings with some cultural elements in them are still quite common. Below is a list of some exciting Zimbabwe wedding traditions. Zimbabwe Wedding Traditions Lobola (Roora) Lobola is the bride price that must be paid before the bride is released to the groom. The … [Read more...]